XXXTentacion - ဝီကီပီးဒီးယား
Mugshot of Onfroy in December 2016
(1998-01-23)ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၁၉၉၈
ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၈(2018-06-18) (အသက် ၂၀)
Murder (multiple gunshot wounds to the throat)
Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy (ဇန်နဝါရီလ 23, 1998 - ဇွန်လ 18, 2018) XXXTentacion, အဖြစ်သိကျပြီး, [မှတ်စု ၂] အမေရိကန်ရက်ပ်အဆိုတော်နှင့်တေးရေးဆရာဖြစ်သည်။ XXXTentacion သည် မိမိ၏တိုတောင်းလှသော အနုပညာသက်တမ်းအတွင်း Teenager ပရိသတ်များကြားတွင် သူ၏သီချင်းများသည် အောင်မြင်မှုများရှိခဲ့သည်။ ဝေဖန်သူများနှင့် ပရိသတ်များက ဂီတဘက်တွင်ထူးချွန်မှုအတွက်သူ့ကိုမကြာခဏချီးကျူးလေ့ရှိသည်။ Xသည် emo, trap, lo-fi, indie rock, nu metal, hip hop, R&amp;B နှင့် punk rock စသည့်ဂီတအမျိုးစားများကို သီဆိုခဲ့သည်။ သူသည် emo-rap နှင့် SoundCloud Rapper များတွင် ဦး ဆောင်သူတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီး ၂၀၁၀ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် လူများရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ 
ဖလော်ရီဒါ Plantation တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး XXXTentacion သည်သူ၏ငယ်အချိန်အများစုကို Lauderhill တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှ လွတ်လာပြီးနောက်သီချင်းများကို စတင်ရေးသားခဲ့ပြီးမကြာမီသူ၏ဂီတလုပ်ငန်းကို SoundCloud တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သည်။ တေးဂီတတွင်အခြားသော အနုပညာရှင်နဲ့ရက်ပ်ဂီတ တွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများနှင့်နည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ တေးဂီတကိုစတင်ရေးသားခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်သူသည် underground collective Members Onlyတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အခြားအဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်အတူမကြာမီတွင် SoundCloud rap တွင်လူကြိုက်များလာသည်။
XXXTentacion သည် "Look at Me " တစ်ခုတည်းနှင့်ရရှိခဲ့သည်။ သူ၏ပွဲ ဦး ထွက်အယ်လ်ဘမ် 17 (၂၀၁၇) ကို အမေရိကန်၌နှစ်ဆပလက်တီနမ် အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ သူ၏ Sad Album (2018) သည် Billboard Hot 200 တွင်Topဝင်ခဲ့သည် Xရဲ့ သီချင်းဖြစ်တဲ့ "Sad", သည် Billboard Hot 100  တွင် နံပါတ် တစ်ချိတ်ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီလ 2021 ၌YouTubeတွင်
၂၀၁၈၊ ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် XXXTentacion သည် Florida ၏ Deerfield Beach ရှိဆိုင်ကယ်အရောင်းဆိုင်မှ အထွက် မီးပွိုင့်တွင် သေနတ်ဖြင့် အပစ်ခံရ၍ ၂၀ အရွယ်တွင် သေဆုံးခဲ့သည် ။ Louis Vuitton အိတ်မှဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ နဲ့ခိုးပြီးနောက် တိုက်ခိုက်သူတွေဟာ SUV ကားတစ်စီး ကိုမောင်း၍ ထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ သံသယရှိသူလေး ဦး ကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ စွပ်စွဲခံရသူများအတွက်ရုံးတင်စစ်ဆေးမည့်ရက်ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ 
XXXTentacion သည် RIAA အမေရိကန်၌ 61 သန်းယူနစ်များ၏ရောင်းအားရှိပြီး -certified BPI နှစ်နိုင်ငံရောင်းချ 68 သန်းရှိကြောင်းမှတ်တမ်းများအားရှိခဲ့ပြီး UK၌ ၇သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရသည်ဟု မှတ်တမ်များရှိခဲ့သည် ။ သူသေဆုံးပြီးနောက်သူသည် အမေရိကန်ဂီတဆု နှင့် BEST Hip Hop ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး Billboard တွင် ဂီတဆု ၁၁ ခုကိုရရှိခဲ့သည်။  သေဆုံးပြီနောက် အယ်လ်ဘမ်နှစ်ခုဖြစ်သော Skins (2018) နှင့် Bad Vibes Forever (2019)ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်း Album သည် Billboard 200 တွင် X၏ဒုတိယမြောက် နံပါတ်တစ်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်လာသည်။
↑ XXXTentacion Private Funeral Featured Police Protection။ The Blast (July 2, 2018)။
↑ 1035 TheBeat (March 29, 2017)။ XXXTentacion Calls Out Drake In His First Interview After Jail!။
↑ Woods၊ Aleia။ XXXTentacion’s Brother Sues Rapper’s Mother Again, Claims She’s Hiding X’s Estate’s Money in Fake Companies။
↑ XXXTentacion's Son Gekyume Onfroy Is Born။
↑ XXXTentacion's 'Sad!' Vaults From No. 52 to No. 1 on Billboard Hot 100 Following Rapper/Singer's Death။ Billboard။
↑ XXXTentacion Murder Suspect Seeks Bond to Get Out of Jail (2019-09-19)။
↑ Fitzgerald၊ Trent။ XXXTentacion Nominated for 10 2019 Billboard Music Awards - XXL။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=XXXTentacion&oldid=729423" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။